Akụkọ - Ikpu okpu bụ Àgwà
Ikpu okpu bụ agwa
Na egwu mmiri Margaret Howell / Summer 2020, anyị hụrụ uwe ogologo ọkpa, lemon buru ibu na uwe elu turquoise, ogige ndị mara mma, na uwe ndị na-agba ọkpọ. Ma eleghị anya, ọ bụ ọnọdụ ahụ, ma sọks n'elu uwe ogologo ọkpa adịghị njọ, ma ọtụtụ n'ime ha yi agwa agwaokpu Otu a bụ eziokwu na Gucci, ebe iwe iwepụ etiti abalị nke Alessandro Michaele na-egosi hyperrealism agwa okpu na agba agba agba na neon na-enwu gbaa.
Agwa okpu, nke na-araparasi ike n'isi n'isi dị ka bandeeji, abụghị ihe ọhụụ maka ndị ọkụ azụ ma ọ bụ agụmakwụkwọ, mana dị ka ngwa "okomoko", ọ bụ maka nwoke na nwanyị, oge oyi ma ọ bụ oge ọkọchị. nwere akwa jeans ma ọ bụ uwe eji agba agba, ugbu a ọ na-eyi ya cardigans ejiri aka ya ma ọ bụ ndị na-emepụta suut.Howell ahụghị ihe ọ bụla dị njọ na nke ahụ; okpu, dịka akpụkpọ ụkwụ, setịpụrụ ụda maka uwe, ọ na-ekwu.
Nchọgharị maka okpu beanie abanyela n'afọ gara aga ka ọ bụrụ otu n'ime okpu ndị kachasị ewu ewu, ha enweghịkwa nsogbu nha nke na-eche ọtụtụ ndị mmadụ ihu. Red beanie hats with silhouette knits and hoodies have been a street style staple. Akara na ụdị ejiji dị njọ na-enye ohere ịkwa akwa na agwakọta na-adịghị mma, uwe na-adịkwaghị agwụ ike kama ọ bụ kwaaji maka ọnọdụ onye ọ bụla, na okpu beanie nwere uwe na-adị ka uwe '80s Armani na sweta kama uwe elu na tie.
Ọ bụghị naanị na beanie hats, mana Chanel's School Girl style, nke na-asọpụrụ maka ihe nkiri ọhụụ ọhụrụ, na-enwekwa okpu nwere okpu nwere corms a na-ebugharị. New Wave fim na-enye echiche pụrụ iche ma na-adịgide adịgide nke ụmụ nwanyị French - ihe amamihe dị n'ime pixie ntutu, eyeliner na-acha uhie uhie, nnukwu ifuru na-acha ọbara ọbara na okpu isi, ma ọ bụ yi uwe na Brittany na obere uwe mwụda.1 Ọ ga-abụ afọ nke ngwa, yana runways dị na New York, London, Milan na Paris na-achịkwa iberibe arụ ọrụ nke nwere ike ịdaba na uwe akwa mgbe oge gachara. Ọ bụkwa ụzọ dị mma iji mee ka uwe gị na-adigide na-adabaghị na mgbochi. E kwuwerị, ngwa, dị ka "ejiji dị nro," nwere ike ịmepụta ngwakọta nke ọnọdụ na ụdị.
Na narị afọ nke iri na itoolu na mmalite narị afọ nke iri abụọ, ndị mmadụ niile na-eyi okpu, gụnyere ndị nọ n'ọkwa dị ala. Ruo mgbe a lụrụ Agha Worldwa nke Abụọ, e chere na ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị nye nwa amadịla ka ọ ghara iyi okpu. Ọmarịcha n'àgwà na mkpakọrịta akụkọ ihe mere eme okpu okpu, ma ọ bụ Derby okpu, dị ka ite kpụkọrọ akụ ma kpọọ ya aha na narị afọ nke 19 nke Britain nke mere ka ụdị ahụ mara. Fedora, nke akpọrọ aha otu aha ahụ, bụ okpu dị nro nke nwere elu ma nwee obosara sara mbara nke enwere ike ịtụghari gburugburu Ọ bụ ọkacha mmasị nke nwa nwoke, ọ bụghị naanị iji ya chebe mmiri ozuzo, kamakwa enwere ike apịa ya ma tinye ya n'ime akpa. nwoke n'ime “Casablanca” ka onye nyocha nke onwe ya “Ihi ụra Nnukwu”, ha na-aga n'okporo ámá ndị dị na New York na-ekpuchi uwe mkpuchi na-eyi uwe ojii na isi awọ.
Onye edemede Peter Mayer chere na okpu ụmụ nwoke mara mma ma dịkwa mma, wee kwuo ihe banyere agwa mmadụ. "Okpu okpu na-abụkarị ụghalaahịa nke mmadụ dịka imi bụ ọdịdị mmadụ," ka o dere na About Taste.
Gbanye " Mortụtụ ọma Britain" N'afọ gara aga, onye ọbịa ahụ nyere Trump onyinye - okpu Churchillian - dị ka onye ọbịa.Mr okpu okpu a kpatara ọgba aghara na ntanetị, o doro anya na ọkwa dị iche na esemokwu a na-ebo ya ebubo na-eme na ntutu isi ya.
Cigars, osisi na-eje ije, ụta agbatị na uwe mpempe mmiri bụ uwe niile nke Churchill, yana ụdị okpu ya nyere ndị na-ese foto otu nnọkọ ọhịa na 1920s. Churchill were obere oge iwe iwe na edemede: "Otu n'ime ihe ndị kachasị mkpa nke Akụrụngwa nke onye ọrụ gọọmentị bụ akara dị iche iche nke nwoke ọ bụla na-amụta ịchọ na ịmata. amamihe nke ọkpọiso Disraeli, olu olu Gladstone, ajị agba nke Lord Randolph Churchill, iko iko Chamberlain, ọkpọkọ Baldwin - 'ihe ndị a' niile dị mkpa. nwee otu akara ndị a, ya mere ndị na-ese ihe nkiri kere akụkọ ọdịnala nke okpu m iji mejuo ọchịchọ a. "
Akụkọ a, ọ kọwara, bidoro n'oge mkpọsa ntuli aka nke 1910. Ọ nọ na Southport ya na nwunye ya na-aga ije n'akụkụ osimiri. "Otu okpu nwere obere mmetụta - amaghị m ebe o si bia - adịlarị akpa m. Ọ dinara na tebụl n'ime ụlọ nzukọ ahụ, m wee tinye ya n'echeghị echiche. Mgbe anyị laghachisịrị ije anyị, onye na-ese foto bịara wee see foto. Kemgbe ahụ, ndị na-ese foto na ndị nta akụkọ na-ese okwu banyere okpu m: ole, Kpọmkwem; Kedu ụdị ọdịdị ha si dị; Kedu ihe kpatara m ji agbanwe okpu m; Ego ole m ji kpọrọ ha, na ihe ndị ọzọ. Ọ bụ ọtụtụ ihe nzuzu, ọ dabere na foto."
Ma onye na-ede akụkọ ndụ Churchill Peter Mendelssohn kwenyere na akụkọ Churchill abụghị eziokwu.Churchill, nke maara nke ọma na okwu nduhie, enweghị ike ịcheta ọdịiche dị n'etiti okpu ya na nke ndị ọzọ. Churchill nwara ọtụtụ ụdị, site na okpu kachasị elu ruo okpu bowler, nke kachasị ama nke bụ okpu Humboldt, ma ọ bụ okpu burger.Maka okpu Humboldt bụ ụdị ajị anụ nwere ajị anụ nwere mkpịsị aka yiri mkpịsị aka n'elu, mgbachi atụ ya na eriri satin n'etiti ya. Eze Edward VII chọtara na German Obodo Bad Homeburg na 1880 ma weghachite England.Churchill nwere ọtụtụ okpu ndị a, site na agba ojii ka ọ na-acha odo odo na-acha odo odo nke nwere eriri ojii, gụnyere okpu Humboldt nke rere $ 11,775 na auction na 1991 ma nwee ọla edo embossment nke mkpụrụ okwu Churchill n'ime.
John F. Kennedy, ya na ụdị ntutu ọhụrụ ya ọhụụ na isi ntutu isi ya nke anaghị ekpuchi ekpuchi, belụsọ na obere okwu, bụ ezigbo okpu.er.But iwu nke ụmụ nwanyị izizi dị iche, ọkachasị ọhaneze. Na nyocha Google, "okpu Jacqueline Kennedy" bụ nhọrọ nọọrọ onwe ya, nke na-ezo aka na obere okpu okpu nwere elu dị larịị, ahụ na-emighị emi na enweghị nku, n'ihi na ọ dị ka Pillbox. A makwaara ya dị ka Pillbox Hat, nke sitere na okpu ndị agha. Ihe mere na Jenụwarị 20, 1961, ejiri nlezianya dezie ya, ebe Kennedy ghọrọ onye isi ala America mbụ amụrụ na narị afọ nke 20 iji wepụta adreesị mmalite na telivishọn agba.
Mana ọ bụghị ihe niile gara dịka atụmatụ si dị. N’abalị, snow nke dara ada dị sentimita asatọ na Washington, DC, ma n’oge oyi, n’echi ya, ndị isi ndị ọzọ nile yi uwe mkpuchi ndị siri ike, ma e wezụga Jacqueline. Ọ bụghị naanị na ọ bụ oge dị mkpa na ọrụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị Jackie na ụdị onwe ya, ọ ghọkwara otu n'ime ihe ndị ama ama na akụkọ ntolite nke onye isi ala. Site mgbe ahụ gaa n'ihu, igbe mkpuchi ọgwụ ghọrọ ihe ịtụnanya na 1960.
Ekwuru na Jacqueline anaghị achọ okpu n'ihi na o chere na isi ya buru oke ibu. Halston, onye na-ese okpu ahụ, na-arụ ọrụ oge ọrụ iji dozie nsogbu ahụ. Tupu inye ya Jacqueline, ọ tukwasịrị ya n'isi ya, nọdụ n'etiti enyo ihu na azụ. , ma tụgharịa ya na azụ iji jide n'aka na ọ dị oke mma n'akụkụ niile. Ọ dị oke ikuku na Jacqueline rutere ma kpoo okpu ya, hapụ otu oghere na-emighị emi nke na ọ nweghị onye nọ n'ime ụlọ ahụ hụrụ, mana ọ gbasara ụwa niile, site na ọha mmadụ rue ime ime ime obodo Midwest. "Onye ọ bụla depụtachara ụdị ahụ hapụrụ akụ ya," Halston mechara jiri ọchị chịa.
N'ụbọchị e gburu JFK, Jacqueline yi uwe mgbokwasị n'elu ya nke nwere uwe na-acha odo odo. A kpọchiri uwe ahụ a na-awụfu ọbara na National Archives na Maryland wee nye iwu ka ọ zonahụ ya n'ihu ọha ruo mgbe opekata mpe 2103, okpu ahụ dịkwa ahughi ozo.
N'afọ ndị 1970, na ọbịbịa nke ndị na-edozi ntutu isi, ntutu malitere ịdị na-ewu ewu karịa okpu. Site na nwayọ, usoro ọdịnala nke narị afọ nke iri na itoolu dịka ịkwa akwa okpu na okpu na-enwu ọkụ niile mana ọ furu efu n'ụlọ akwụkwọ ebe enwere ike iji aka mee okpu. Euromonitor, otu ụlọ ọrụ nyocha ahịa - otu ụzọ dị nta nke $ 52bn bagbag bag, dị ka Euromonitor si kwuo, ahịa dị mkpa dị ka akụrụngwa oge ezumike, ọ bụghị naanị maka oge a kapịrị ọnụ. n'èzí isi obodo ejiji, achọ okpu na-eto.
"Ọ ghọrọ ụdị okwu ọhụrụ, ụdị egbugbu ọhụrụ n'ụzọ." Dị ka onye mmebe Priscilla Royer si kwuo, "okpu nwere ike ịgbanwe onyinyo mmadụ, ọbụnadị omume, n'ụzọ kachasị mfe." Royer nwere mmasị na ọgbara ọhụrụ nke okpu, na-anwa imebi echiche nke ememe nke okpu a na-enwebu na mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Nsogbu nke ọtụtụ nwere mmetụta okpu bụ na ha anaghị adị mfe iso, yabụ na ọ na-arụ ọrụ na ihe ndị dị nro nke na-agbada dị ka uwe ma wepụ Mgbe ahu o nwere nkwuwa okwu. Kedu maka okpu karịa nche anwụ? Site na ịse onyinyo ahụ na ịhọrọ ihe a ga-eme ya, ọ nwere mmasị na ị na-eyi tiara. "Na mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ike ya na-adọrọ mmasị."
Post oge: Jun-11-2021